PPC + Organic = Kitika bebe kokoa | Martech Zone
Zoma, Martsa 30, 2012 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Douglas Karr
Na dia sombin-tena aza, Fikarohana Google dia namolavola ity infographic ity mba hanomezana porofo ny fiovan'ny tahan'ny click-through rehefa misy valin'ny fikarohana organika miaraka amina doka fikarohana karama. Ny fampifanarahana azy roa dia afaka manampy ny varotrao amin'ny lafiny roa samy hafa… manome trano sy trano kely bebe kokoa hikitika ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana. Ny antony hafa, izay mety manakiana kokoa, dia ny famindrana mpifaninana iray farafaharatsiny!
Tags: fikarohana googleGoogle +laharana biolojikafikarohana biolojikafikarohana karamamandoa isaky ny kitihoppcppc marketingserpserp FNTlaharana serp
Apr 2, 2012 amin'ny 10: 06 AM
Azo antoka fa misy zavatra holazaina amin'ny fananana lisitra karama sy organika amin'ny pejy mitovy amin'ny SERP iray. Voalohany, mendrika ny mpitsidika izy io. Raha miseho indroa ny marikao dia tsy maintsy mifandraika amin'ny filan'ny mpikaroka izany. Faharoa, manatsara ny vintana azo kitihana. Ny olona sasany dia hanao tsindry amin'ny doka, ny sasany kosa hijery ny vokatra voajanahary. Raha miseho amin'ny roa ianao dia manintona ireo karazany roa.